Muxuu u baaqday shirkii madaxda maamul-goboleedyada ee Garowe? - Bulsho News
Mustafe Cumar oo beeniyay in cudurro aanan la aqoon ay...
Xigashada Sawirka, JTV
Madaxweynaha Galmudug ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadkii isku xilqaamay xalinta khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisulwasaare Rooble, haseyeeshee waxaa jirtay aragtiyo ay qabeen siyaasiinta mucaardka ahi iyo dad ka ag dhow xafiiska ra’iisalwasaaraha oo madaxweyne Qoor-Qoor u arkayay in uu aad ugu dhow yahay madaxweyne Farmaajo.
Dedaalladaasi la doonayay in lagu soo afjaro khilaafka madaxweynaha iyo ra’iisalwasaaraha oo ay si wada jir ah u wadeen Qoor-Qoor iyo dhiggiisa Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-Gareen ayaa markii dambe guuldareystay.
Waxaana dad badan ay ka dhur sugayeen waxa ka soo bixi karaya shirkan haatan baaqday.
by Bulsho Media 25 seconds ago 25 seconds ago
by Bulsho Media 40 seconds ago 40 seconds ago
Barcelona Oo Xasuuqday Kooxda Valencia & Koeman Oo Uu Cadaadisku Ka Yaraaday
Shaxda Ay Arsenal Kaga Hor Tagi Karto Crystal Palace Kulanka Caawa.
“Waan ku hanbalyaynayaa Somaliland in ay ka qabsoomeen...